PVTV ၏ ပြည်သူ့အသံကဏ္ဍ… – PVTV Myanmar
စစ်တပ်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဘာ့ကြောင့်မသုံးစွဲသင့်သလဲ ၊ စစ်တပ်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ပြည်သူတွေ ဘာ့ကြောင့် သပိတ်မှောက်နေကြတာလဲ စတဲ့ ပြည်သူ့အသံတွေကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 3.7K Share – 157
Nick Fu Ry says:
2021-08-19 at 7:24 PM
ဟိုဟာလေ NUG အစိုးရ က အခုလောလောဆယ်မှာ ဘာ ဘတ်ဂျက်မှလည်းမရှိသေးတော့ ထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုခုစီက စစ်တပ်တစ်ခုခုရဲ့သေနတ်တွေခဏငှား ကျည်ဆံလေးပဲဝယ်ပြီးတိုက်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းရှိရင်အကုန်အကျသက်သာတဲ့အပြင်နောင်ရေရှည်မြန်မာပြည်အတွက်ပိုsaveဖြစ်မယ်ထင်တယ်သေနတ်တွေအပိုင်ဝယ်ကြတော့ငွေတွေအများကြီးပိုကုန်တဲ့အပြင်အချိန်တွေအများကြီးယူရတယ်.တော်လှန်ရေးကြီးပြီးလို့ဒီမိုကရေစီရ ရင်တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံစီကလက်နက်တွေရော.စစ်ခွေးတွေစီကလက်နက်တွေရော PDF တွေစီကလက်နက်တွေရောနဲ့က မြန်မာပြည်မယ်လူတိုင်းကိုယ်စီလက်နက်ဖောင်းပွနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော့ကြီးဖစ်လိမ့်မယ်.
နဂိုကမှ ကိုယ့်ကောင်တွေက ရည်းစားစီကအဖြေမရတာတောင် ကပ်ကျီးနဲ့စောက်ထိုး go
သူငယ်ချင်းအား အရက်သောက်သွားခေါ်ရာ မလိုက်သဖြင့် ဒါးမ ခုတ် ဒုတ်..😀
ဆိုပြီး face book မှာသတင်းတွေ ဖတ်နေရတာ နောက်ဆို ရည်းစားကအဖြေ မပေးသဖြင့် သေနတ် နဲ့ ပစ် ဂစ်. . .
ကွမ်းယာတောင်းစားရာ မကျွေးဘူး ဟု ပြောသဖြင့် ဘရင်း gun ဖြင့် စွဲ .ပွဲ.
သူငယ်ချင်း နှစ်ဦး အတူလျှောက်လာရာလေ လည်သည်ကို နံလွန်းသည်ဟု ဆိုကာ စိန်ပြောင်းနဲ့ ထု ဘု. . ဆို
သေဘီဗျာ. . 🙁
2021-08-19 at 7:32 PM
2021-08-19 at 7:40 PM
H Win Tun says:
Fish Lay Li-su says:
စစ်တပ်ရဲ့ ထုပ်ကုန်နံမည် အတိအကျ ပြောပြစေချင်တယ်
2021-08-19 at 9:14 PM
2021-08-20 at 12:42 AM
2021-08-20 at 7:32 AM
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနက တင်ဆ…